जेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भ'गाएपछि, कान्छो भाई रुँ-दै मिडियामा आए (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारजेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भ’गाएपछि, कान्छो भाई रुँ-दै मिडियामा आए (भिडियो सहित)
March 21, 2021 admin समाचार 873
नेपालमा आजकल हरेक दिन न’राम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह ‘त्या कहिले आ त्म’ ह त्या कहिले चोरी त कहिले लु& ट पाट । संक’टकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही न’सोचेको घट’ना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बनाउदै आएको छ ।
झापामा फेरि अर्को सोच्नै नसकिने घि’नला’ग्दो घटना घ’टेको छ । श्रीमान १५ दिन कतै काम गर्न जादा एक परि’वारमा जेठाजुले बुहारी भगाएका छन्। धर्म चाहार नाम गरेका पिडित युवा मि’डियामा आएर आफ्नो श्रीमती दाइले भ’गाएको भन्दै आफ्नो गु’ना’सो पोखेका छन् ।
क र णी गरेको आ रो’ प मा ८ बर्ष जेल बसेर आएका माइला दाजुले आफ्नी श्रीमती लिएर १४ दिन अगाडी बाट बेप’त्ता भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उजु’री दिएका छन् तर अहिले सम्म उनकी श्रीमती र दाइ फेला नप’रेपछि उनि मिडि’यामा आएका हुन् ।आखि के हो त वा’स्तविक घ_टना ? – इताजा खबरबाट
तल भिडियोमा सबै जानकारी हेर्नुहोला ।
August 26, 2020 admin समाचार 7535
February 17, 2021 admin समाचार 1797
October 6, 2020 admin समाचार 4980
विदेश गएर टन्नै पैसा क’माउने सपना देखेका शि’वको सपना चकनाचुर मात्र भएको छैन उनले विदे’शमा नपाउनु दुःख समेत पाएका छन् । त्यसरी दुःख पाउने ती युवा बारा जिल्ला’का शिव बच्चन साह रौनियार हुन् । उनी
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (164156)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (158716)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (158220)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (157610)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (157266)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (155198)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (155102)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (153445)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (148854)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145154)